Disemba. Nhọrọ nke novelties ga-agwụ afọ | Akwụkwọ dị ugbu a
Mariola Diaz-Cano Arevalo | | Akwụkwọ, Novela, Akụkọ
December, afọ ọzọ na-aga. Nke a bụ otu nhọrọ nke novelties ikwu nke ọma na aha maka ụtọ niile, site na klaasị ekeresimesi ruo na akụkọ kachasị ọhụrụ nke usoro onyonyo egwu na ọdịdị dị ọcha ma dị mfe nke na-akakarị akụkọ ifo. Anyị na-ele anya.
1 Akụkọ ekeresimesi - Ndị ode akwụkwọ dị iche iche
2 N'ime egwuregwu squid (akwụkwọ ntuziaka na-akwadoghị) - Park Minjoon
3 Ebe ebighi ebi dị - Percy Bysshe Shelley
4 Oge a, nwanyị na nsogbu n'etiti narị afọ - Emilia Pardo Bazán
5 Mafia na-anọdụ ala na tebụl - Jacques Kermoal na Martine Bartolomei
6 Ike karịa ugwu mgbawa - Abián San Gil, María Sánchez, Gabi Martínez, Ander Izagirre na Elsa Mabel López
Christmas akụkọ - Dị iche iche na-ede akwụkwọ
Otu esi ebido na ndi ochie n'etiti oge ochie maka ụbọchị ikpeazụ nke afọ na ememme ya kacha akara. Na ihe dị mma karịa akụkọ Krismas, ọ bụ ezie na n'eziokwu oge ọ bụla dị mma maka ịgụ akụkọ. Nke a bụ mkpokọta ha nke ndị odee dị ka Brothers Grimm ma ọ bụ Hans Christian Andersen ruo mgbe iru Ọ bụ Ray Bradbury na ịgafe akụkọ sitere n'aka ndị edemede narị afọ nke XNUMX gbasara mkpa Oscar Wilde, dickens o Chekhov. Yabụ na anyị nwere aha dịka Oriri ekeresimesi, Dwarf na-awụlikwa elu, The Tin Soldier ma ọ bụ The Snow Queen.
N'ime egwuregwu squid (akwụkwọ ntuziaka na-akwadoghị) - Park Minjoon
Ọ bụ usoro nke afọ, maka esemokwu na ewu ewu nha nha, ya mere, ọ bụ ihe ezi uche dị na ya na ụwa na-ebipụta akwụkwọ weere ohere nke dọtara ya. Akwụkwọ ntuziaka a bụ a ndu banyere ya na ihe niile ọ na-ewe iji nweta ihe kacha mma na ihe omume ọ bụla. Enwere ozi gbasara akụkọ, agwa, Ihe nzuzo nke egwuregwu ọ bụla na otu esi emeri ha ... Na nkenke, site na maka ndị na-eso ụzọ na-enweghị atụ.
Ebee ka Eternals nọ - Percy Bysshe Shelley
Na maka ndị hụrụ uri kachasị mma nke nnukwu ụdị dị ka Percy Bysshe Shelley, nke a bụ anthology, nke zuru oke ruo ugbu a, nke onye na-ede uri, onye edemede na onye ntụgharị asụsụ tụgharịrị Jose Luis Rey. N'ime ya ị nwere ike ịchọpụta Shelley dị mma na nke kachasị kwenye na ikike ọhụụ na nnwere onwe nke uri. Na mgbakwunye, a na-egosi ya na mbipụta abụọ ka ọ nụ ụtọ ederede izizi.
Modernity, Feminism na nsogbu n'etiti ọtụtụ narị afọ - Emilia Pardo Bazan
Iji nye onyinye Emilia Pardo Bazan ị ga-agụrịrị ya mgbe niile, ọ bụghị naanị maka ọrụ edemede ya kachasị, mana maka mkpa ya dị ka otu n'ime ndị ọkà mmụta sayensị kachasị mkpa nke njedebe XNUMXth na mmalite XNUMXth narị afọ. Onye edemede, onye edemede, onye nta akụkọ, onye na-akọ akụkọ (akwụkwọ akụkọ na mkpirisi akụkọ), onye njem, ọkà okwu, onye na-ede egwuregwu, ọkọ akụkọ ihe mere eme na onye nkatọ nke akwụkwọ, onye na-ede akwụkwọ nri na onye ntụgharị okwu, ọrụ a gụnyere. ogbako - nke dị na Paris n'oge opupu ihe ubi nke 1899- na okwu anọ: Valencia, Orense, Madrid na Salamanca. (1899-1905), nke na-esonyere ya na ederede (1901) maka ozi gbasara Joaquín Costa, Oligarquía na caciquismo dị ka ụdị ọchịchị dị ugbu a na Spain.
Mafia na-anọdụ ala na tebụl - Jacques Kermoal na Martine Bartolomei
Un kemmasi aha dị ka ihe mgbochi bụ nke a nke ndị nta akụkọ France abụọ bịanyere aka na ya ebe ha na-agwa anyị banyere ya menus, Ezi ntụziaka na mmanya nke nwere ebe dị mkpa na gastronomy nke Mafia. Dị ka ihe atụ, nke a haziri iji kwadebe maka ọdịda Garibaldi na Marsala na 1860 ma ọ bụ nke mere ememe Maranzano "nara" nke Bronx. Na ọtụtụ oriri ndị ọzọ ha mere iji mee mmemme ncheta na ọganiihu ma ọ bụ atụmatụ atụmatụ na mpụ.
Ike karia ugwu mgbawa - Abián San Gil, María Sánchez, Gabi Martínez, Ander Izagirre na Elsa Mabel López
Ana m ejedebe n'oge pụrụ iche -nke anyị na-aga n'ihu na-ebi, ọkachasị na ọ dị nwute, ndị bi na Canary Island nke La Palma. Nke mgbawa nke Cumbre Vieja ugwu mgbawa Na Septemba 19, nke na-aga n'ihu na-arụsi ọrụ ike, o mere akụkọ akụkọ na onyonyo onyonyo n'ebe niile. Ma ugbu a nke a pụta akwụkwọ ịdị n'otu.
Nwere onyonyo nke onye na-ese foto palmero Abian San Gil, okwu mmalite nke osi nri Jose Andres (Princess of Asturia Award for Concord 2021) na ederede nke Elsa lopez, onye edemede kacha mara amara na nke kacha hụ n'anya na La Palma, na Ander Izagirre, Gabi Martinez y Maria Sanchez. Ndị niile chọrọ igosipụta ihe okike dị egwu na mmetụta mmetụta nke gbara ya gburugburu n'akụkụ ya kacha mma na nke mmadụ. A onu nke nwekwara wepụrụ oké ugbu a nke nkwado na ịdị n'otu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Genres » Novela » Disemba. Nhọrọ nke akwụkwọ ọhụrụ ga-agwụ afọ
Akwụkwọ nke ezi ịhụnanya